သင်္ဘော Delivery, ပြန်အမ်းငွေနှင့်မူဝါဒ Returns - shoppingdirect24.com - SD24
Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bengali Bosnian Bulgarian Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Mongolian Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Serbian Sindhi Slovak Slovenian Spanish Swedish Tajik Tamil Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Yiddish
လှည်း (0) ထွက်ခွာသည်
အဆောက်အဦးအပြင်စခန်း, တောင်တက်, ငါး,
အသစ်: ညဆီမီးခွက် - Moon, PLANET သည်, ချော်ရည်, ဆား
MOBILE PHONE PHOTO STUDIO - zoom, ငါးမျက်လုံး, တည်ငြိမ်မှု, STUDIO ပစ္စည်းကိရိယာများ, etc.
GPS, Bluetooth နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေး Tracker
CAT, ခွေးလေး, aqua / TERRA, ငှက်များ & အခြားသတင်းများအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ
လက်ခြယ်အနုပညာ, မျိုးဆက်ပွားခြင်းနှင့် frame ပန်းချီကား
ယူအက်စ်အေ FROM မှယူအက်စ်အေ TO သို့
သြစတြီးယား crystal လက်ဝတ်ရတနာနှင့်စောင့်ကြည့်
Home > သင်္ဘော Delivery, ပြန်အမ်းငွေနှင့် Return ပေါ်လစီ
သင်္ဘော Delivery, ပြန်အမ်းငွေနှင့် Return ပေါ်လစီ
သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း & Delivery
ကျနော်တို့အရာအားလုံးများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အခမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းပူဇော်ဖို့ဂုဏ်ယူများမှာ! ကျနော်တို့သင်္ဘောကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်း - သင်သွားလေရာရာ၌!
သငျသညျ packages များဘယ်လိုတင်ပို့ရန်သလဲ?
သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ရရှိနိုင်မြန်ဆန်ပေးပို့အာမခံနှင့်မဟုတ်ရင်မရရှိနိုင်ပါဆုံးချွေန်ဆောင်မှုအားဖြင့်လျှင်တရုတ်, ဟောင်ကောင်သို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်းမှာထုတ်လုပ်သူများ, ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံများပေးသွင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှ packages EPacket အားဖြင့်တင်ပို့ပါလိမ့်မည်။
ဝယ်လိုအားထုတ်ကုန်အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝယ်လိုအားပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်အပေါ်လုပ်၏တဦးတည်းကထုတ်လုပ်တင်ပို့ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ ဝယ်လိုအားထုတ်ကုန်အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရေကြောင်းအဆောက်အဦအများစုများအတွက်အများအပြားတိုက်ကြီးနှင့်နိုင်ငံများ (အမေရိကန်, အမျိုးမျိုးသောအီးယူနိုင်ငံများနှင့်သြစတြေးလျ) တွင်ရှိပါသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်သင်နှင့်အနီးဆုံးအဆောက်အဦထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တင်ပို့ဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဥပမာသင်တစ်ဦးအီးယူနိုင်ငံသားမှန်လျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အကောက်ခွန်သို့မဟုတ်အခြားသွင်းကုန်ပြဿနာများနှင့်အတူပြဿနာများကိုရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အီးယူအနေဖြင့်တင်ပို့ဖို့ကွိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်, သြစတြေးလျနှင့်ညီမျှသည်အခြားဒေသများနှင့်ခရိုင်များအတွက်ဖြေရှင်းချက်မရရှိနိုင်ပါဖြစ်ကြပြီးရရှိနိုင်ပါသည်မှန်လျှင်, လျှောက်ထားပါလိမ့်မည်။ ခြွင်းချက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန် Stock အဆင့်ဆင့်နှင့်ရရှိနိုင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
အခြားအွန်လိုင်း retai လိုပဲlers, wအဆိုပါပစ္စည်းများတင်ပို့ခဲ့ကြတခါအီးမဆိုထုံးစံအခကြေးငွေ, သွင်းကုန်အခွန်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာကိုင်တွယ်အခကြေးငွေများအတွက်တာဝန်ရှိကျင်းပရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အကောက်ခွန်အခြေအနေများတိုင်းပြည်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်မကြာခဏအပြောင်းအလဲများကိုလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် purchasing အသုံးပြုပုံသင်တဦးတည်းအမိန့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. packages များသည်သင်တင်ပို့စေခြင်းငှါသူတို့သည်သင်နိုင်ငံသို့ရောက်လာသောအခါထုံးစံအခကြေးငွေနှင့်ကိုင်တွယ်အခကြေးငွေရနှင့်သင့်နိုင်ငံများတွင်ဥပဒေပြုပေါ် မူတည်. စေခြင်းငှါသဘောတူသည်။
shipping အချိန်တည်နေရာအလိုက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန့်မှန်းသော်လည်း, အာမခံမရနိုင်သည်
ယူနိုက်တက်စတိတ် 4-15 စီးပွားရေးရက်ပေါင်း
ကနေဒါ, ဥရောပ 6-25 စီးပွားရေးရက်ပေါင်း
သြစတြေးလျ, နယူးဇီလန် 6-30 စီးပွားရေးရက်ပေါင်း
ဗဟို & တောင်အမေရိက 15-55 စီးပွားရေးရက်ပေါင်း
အခွားသောနေရာများ 15-55 စီးပွားရေးရက်ပေါင်း
သင့်ရဲ့အမိန့်အဘို့အမရရှိနိုင်လျှင်ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ခြေရာခံ informtion ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ခြေရာခံသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်ကြောင်းကိုသင်၏အမိန့်သင်္ဘောများတစ်ချိန်ကအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
အကြှနျုပျ၏ခြေရာခံခြင်း "ယခုအချိန်တွင်မျှသတင်းအချက်အလက်များရရှိနိုင်ပါ" လို့ပြောပါတယ်။
အချို့သင်္ဘောကုမ္ပဏီများအတွက်ကြောင့်သင့်ရဲ့အမိန့်ကို process မှ 1-5 ရက်ပေါင်းကြာနှင့်သူက system ပေါ်တွင် update လုပ်ဖို့အတွက်ခြေရာခံသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုထပ်မံ 2-5 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းယူနိုငျသညျ။ သင့်ရဲ့အမိန့်6စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အကြာကထက်ပိုမိုထားရှိနှင့်သင့်ခြေရာခံခြင်းအရေအတွက်ကိုမသတင်းအချက်အလက်နေဆဲလည်းမရှိခဲ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်, တူညီတဲ့ဝယ်ယူအတွက်ပစ္စည်းများတခါတရံသီးခြား packages များအတွက်ကိုစလှေတျပါလိမ့်မည်။
ပြန်အမ်းငွေနှင့် Return ပေါ်လစီ
ပြန်အမ်းငွေသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပြန်လာတောင်းဆိုချက်အတွက်အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်မည်သို့ပင်ကျနော်တို့ကအမြဲကောင်းတစ်ဦး resolution အတွက်ကြိုးစားကြသည်မည်!
သူတို့တင်ပို့သည်အထိအားလုံးအမိန့်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အမိန့်ပေးချေခဲ့ပြီးနှငျ့သငျအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်ဒါမှမဟုတ်အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့လိုအပ်လျှင်, သင်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရှိရပါမည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ရေကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်ပြီးတာနဲ့သူကမရှိတော့ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
- သင်ကအချိန်အတွင်းရောက်လာခဲ့ပါဘူးအမိန့်အဆိုပါပစ္စည်းသည်ကတိထားတော် - ငါတို့သည်အရှိဆုံးထုတ်ကုန်သိသိသာသာအစောပိုင်းကရောက်လာစဉ်ပေးပို့အာမခံချက်တစ်ခုလိုလားသူ forma 60 ရက်ပေါင်းရှိသည်။
- သင်ရရှိသောပစ္စည်းကိုစစ်မှန်ဖြစ်စိတ်ချပါ, ဒါပေမယ့်အတုခဲ့သည်
သင်တစ်ဦးငွေပြန်အမ်းရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်သင်မူကား, ပစ္စည်းပြန်လာရပါမည်နှင့် item ကိုအသုံးမပြုနှင့်မူရင်းထုပ်ပိုးအတွက်ဖြစ်ရပါမည်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းထုတ်ကုန်ချင်ပါဘူးဆိုအကြောင်းပြချက်ပါ။ တနည်းအားဖြင့် (အထူးသဖြင့်အနိမ့်တန်ဖိုးကိုထုတ်ကုန်များအတွက်) စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်အောက်မှာသင်ထုတ်ကုန်ကိုဖကျြဆီးနှင့်ဓာတ်ပုံ-သက်သေအထောက်အထားကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုရှာကွပါ - ဒီ option ကိုများအတွက်မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကို item များအတွက်ပြန်လာလိပ်စာအပေါ်အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။
မှားတဲ့ item (သက်သေအထောက်အထား [ဓာတ်ပုံ] လိုအပ်) အရောင်, အရွယ်အစား, ဒါမှမဟုတ်မော်ဒယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်ခံခဲ့ရသည်လျှင်ပြန်အမ်းလည်းဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြသည်။
t လျှင်ပြန်အမ်းလည်းဖြစ်နိုင်သမျှများမှာသူကို item (သက်သေအထောက်အထား [ဓာတ်ပုံ] လိုအပ်) အလွန်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းရောက်ရှိလာသည်။
ထုတ်ကုန်ဓါတ်ပုံများပေါ်တွင်အရောင်များကိုအနည်းငယ် illumination သက်ရောက်မှု, ကင်မရာထောင့်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင် Display ကိုပြဿနာအဖြစ်ကွဲပြားနိုင်သည်။
- သင်၏အမိန့် (ဆိုလိုသည်မှာတိုးချဲ့ကာလအတွက်အိမ်ကနေ, မှားရေကြောင်းလိပ်စာပေးနှင့် / သို့မဟုတ်ပါက undeliverable အဖြစ်သင့်စာတိုက်များကပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်) ကြောင့်သင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းအချက်တွေရောက်လာခဲ့ပါဘူး
- သင်၏အမိန့် (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကနှောင့်နှေးအကောက်ခွန်ကရှင်းလင်းမဟုတ်) ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပရှိခြွင်းချက်အခြေအနေများရောက်လာခဲ့ပါဘူး။
သငျသညျပို့ဆောင်မှုများအတွက်အာမခံကာလ (15 ရက်) အပြီး 60 ရက်အတွင်းပြန်အမ်းငွေတောင်းဆိုမှုများတင်ပြနိုင်ပါတယ်။ သင်ကကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျစာမျက်နှာပေါ်တွင်သတင်းစကားပေးပို့ခြင်းဖြင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကြောင်း t ကို ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါသူ checkout နှင့်ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကုမ္ပဏီ MLVEDA ကစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်သည်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်၎င်းတို့၏စာမျက်နှာများမှ redirected လိမ့်မည်။ checkout နှင့်ငွေပေးချေမှုသင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောငွေကြေးကို၌ပြစ်မှားမိနေကြသည်။
ကျနော်တို့ Paypal အကောင့်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသာငွေပေးချေမှုပံ့ပိုးပေးသူနှင့်အတူကျိန်းဝပ်။ ကျနော်တို့ခရက်ဒစ်ကဒ်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အ Stripe ဟာကိုသုံးပါ - လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသန်းပေါင်းများစွာအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ။
Privacy ဖော်ပြချက် & GDPR လိုက်နာမှု
မြန် EPacket နိုင်ငံများစာရင်း
မှတ်ပုံတင်ပြီး WE ချက်ချင်းအသုံးပြုရန် VIP ကုဒ်တွေကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ!
100 ဘာသာစကားများနှင့် 160 ငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသော!
ကျွန်ုပ်တို့၏လက် Etsy အပေါ်အနုပညာနှင့်မျိုးဆက်ပွားခြယ် !! ပီကာဆိုသို့မဟုတ် Rembrandt ခြယ်သနေတဲ့လက်ကိုပိုင်ဆိုင် !!
မူပိုင်ခွင့်© 2019, shoppingdirect24.com - SD24. http://es.shopify.com